XOG: AMISOM oo Saldhig looga sameynayo Magaalada Jigjiga | Keydmedia
XOG: AMISOM oo Saldhig looga sameynayo Magaalada Jigjiga
Lama oga sida Abiy Axmed uga aqbali doonaan dhinacyada uu quseeya howlgalka Midowga Afrika, sida dowladda Soomaaliya iyo Qaramada Midoobay.
MUQDISHO, Soomaaliya – Howlgalka Midowga Afrika ee AMISOM ayaa la qorsheynayaa in saldhiga ugu weyn geeska Afrika looga sameeyo magaalada Jigjiga ee xarunta dawlad deegaanka Soomaalida Itoobiya.
Sida ay daabacday majalada Africa Intelligence, Ciidamada AMISOM ayaa ku sii negaan doona deegaanada Soomaalida, gaar ahaan xadka ay wadaagaan Soomaaliya iyo Itoobiya, halkaas oo haatan saldhig weyn looga sameynayo.
Ra’iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Axmed oo dagaal kula jiro dawladda Masar oo saldhig Milateri ka sameysaneyso maamulka Somaaliland ayaa la sheegayaa in uu qorshahaan wado, isagoo in muddo ah raadinayay, haseyeeshee uu haatan Jigjiga ka helay.
Wargeyska ayaa sidoo kale daabacay in saldhigaan lagu tababari doono Ciidamada AMISOM ee ka qeyb qaadanaya howlgalka la dagaalanka Al-shabaab, sidoo kalena laga difaaci doono Itoobiya.
Itoobiya waxaa Soomaalya ka jooga Ciidamo badan, kuwaasoo qaarkood ku sugan qeybo ka mid ah gobolada Bay, Bakool, Hiiraan, Gedo iyo Galgaduud, waxaana mararka qaar dhacda in ciidamo aan wadan Koofiyada cagaaran ee AMISOM ay gudaha dalka soo galaan.
Lama oga ilaa iyo hada waxa laga yeeli doono qorshaha Ra’iisul wasaaraha Itoobiya ee ah in uu AMISOM saldhig ka siiyo magaalada Jigjiga ee xarunta dawlad deegaanka.
Howlhgalka Midowga Afrika ee Soomaaliya ayaa dhowr jeer oo hore muddo kordhin lagu sameeyay, waxaana howlgalkaan uu taageero badan ka helaa Midowga Yurub iyo Qaramada Midoobay.
0 Comments Topics: al shabaab amisom soomaaliya
Farmaajo oo xiriir la sameeyay RW Sudan
Warar 14 September 2020 21:11
Warar 14 September 2020 20:58
Qarax ka dhacay Ceel-Waaq
Warar 10 September 2020 14:20
Kumuu ahaa hogaamiyihii Al-Shabaab looga dilay Saakow?
Warar 8 September 2020 19:36